Neymar oo Twitter-ka muuqaal uu soo dhigay ku kululeeystay Ronaldo…Tolow maxay tahay sababta? – Gool FM
Neymar oo Twitter-ka muuqaal uu soo dhigay ku kululeeystay Ronaldo…Tolow maxay tahay sababta?
(Rio) 15 Juunyo 2016. Superstar-ka Brazil Neymar Jr waxa uu beegsaday Twitter-ka si uu u xujeeyo Ronaldo.
Waa Ronaldo-kii asalka ahaa ee ciyaaraha ka fariistay.
24 jirka waxa uu bootka gaarigiisa si la yaab leh oo aan hore loo arag u galiyey kubadd uu rabay in uu hore u qaato. Waxa uu Twitter-ka ugu qoray Ronaldo: “Maxaad isku haysaa”.
Neymar oo 46 gool u dhaliyey Brazil kaliya waxa uu u jiraa Ronaldo oo 16, R9 62 gool ayuu u dhaliyey Brazil taas oo ka dhigan in cel celis ahaan uu kulan walba dhalinayey 0.63 hala Neymar uu cel celiskiisu yahay 0.66.
Xujadan Neymar ka soo qaad uun xayeysiin ay ku mideysan yihiin labada hayey ee reer Brazil.
Ronaldo oo xanaaqsan malaga helaa funaanada marka kulanka dhamaado? Daawo kabtanka Iceland oo tijaabiyey!